Abenzi basechina beShell ingxubevange yeringi / Shaft sleeve kunye nabathengisi | Sekonic
Isitayile seAlloy Ring / Shaft sleeve
Isitayile seAlloy Shaft sleeve / Iringi
Igama lezinto: Isitayile 6 / 6B / 12/25
Lobukhulu: Njengokuba kuchazwe kubathengi
Umhla wokuzisa:Iintsuku 15-45
Umphezulu: Ikhazimlisiwe, ikhanya
Imveliso yokuvelisa: Ukuphosa
Ii-alloys zeSathelayithi ubukhulu becala yi-cobalt esekwe kwizongezo ze-Cr, C, W, kunye / okanye Mo. Ziyamelana ne-cavitation, umhlwa, ukhukhuliseko, ukubola kunye nokuqaqamba. Ii-allovs zekhabhoni ezisezantsi zihlala zinconyelwa i-cavitation, i-sliding wear, okanye i-gallina ephakathi. Iialloys eziphezulu zekhabhoni zihlala zikhethelwa ukuncipha, ukukrala okungathethekiyo, okanye ukhukuliseko lomhlaba olusezantsi iStellite 6 yeyona alloy yethu ithandwayo njengoko ibonelela ngolungelelwano olufanelekileyo kuzo zonke iipropathi.
Ii-alloys zeSathelayithi zigcina iipropathi zazo kumaqondo obushushu aphezulu apho zinokuxhathisa okugqwesileyo kweoksijini. Ziye zisetyenziswe kubushushu be-315-600 ° C (600-1112 F). Banokugqitywa kwinqanaba elikhethekileyo lokugqitywa komphezulu kunye ne-coefficient ephantsi yokukhuphisana ukunika ukugqoka okufanelekileyo.
Ingxubevange Ukwakhiwa Ukuqina HRC Uluhlu lwezinto ting Izicelo eziqhelekileyo
Isitayile 6 C: 1 Cr: 27 W: 5 Co: Bal 43 1280-1390 Ingxubevange yokunganyangekiyo kukhukuliseko lomhlaba esetyenziselwa ngokubanzi konke ukusebenza ngokujikeleza. Utyekelo oluncinci lokuqhekeka kuneStelayithi "i-12 n maleko aphindaphindiweyo, kodwa ukunxiba okungaphezulu kunesitayile" se-21 ir abrasion kunye nesinyithi kwiimeko zentsimbi. Iimeko ezifanelekileyo zempembelelo. Ukumelana nefuthe elifanelekileyo. Izihlalo zevalve namasango: iishafi ze-ump kunye neebheringi. Ukhuselo lomhlaba kunye nezibini ze-rollina. Amaxesha amaninzi kusetyenziswa self-mated. Inokuguqulwa ngesixhobo se-carbide. Ikwafumaneka njengentonga, i-electrode kunye nocingo.
Isitayile 6B C: 1 Cr: 30 W: 4.5 Co: Bal 45 1280-1390
Isitayile12 C: 1.8 Cr: 30 W: 9 Co: UB 47 1280-1315 Iipropathi phakathi kwezo zeSathelayithi "1 kunye neSathelayithi" 6.Ukuxhathisa okungaphezulu kwe-Abrasion kuneSte satellite "6, kodwa stil impembelelo elungileyo ukumelana. Isetyenziswa ngokubanzi njengokusika kumzi mveliso wempahla eyolukiweyo, yemithi kunye neplastiki kunye neebhereinas. Ikwafumaneka njengentonga, i-electrode kunye nocingo .
Iimveliso zeSelfowni eziFumanekayo kwiiSekonic Metals
Isitayile se-6 / 6B / 12 seWelding Wire
Ukubonelela ngeSelfowuni 6 / 6B / 12 yocingo lokuwelda kwifom yekhoyili kunye neFom yobude obusikiweyo
Isitayile se6B / 12 neeBhari kunye neeRandi
Isitayile se6 / 6B / 12iRing kunye neSleeve
Ukuqhubekeka kwesiseko seAluminiyam:
Intsimi yesicelo seAluminiyam yeAlloy:
Isethelayithi inokusetyenziselwa ukwenza iinxalenye zevaluva, iipompu zokufakela, ii-injini ze-injini zokulwa ne-corrosion, iibheringi ezinobushushu obuphezulu, iziqu zevalve, izixhobo zokulungisa ukutya, iivelufa zenaliti, umngundo oshushu we-extrusion, ukwenza abrasives, njl
Egqithileyo Intwasahlobo ye-Inconel Wave
Okulandelayo: Yenza ingxubevange 31 esisangqa
cobalt ingxubevange 6B sleeve
Isitayile se-6B shaft sleeve
satellite ingxubevange Sleeve
Isitayile 6 / Isitayile 6B / Isitayile se12 / iStelayithi ...
Isitayile 6B, Ucingo lweWelding, IHaynes 25 Intambo, Isitayile 6, iringi yesitayile, Yenza ingxubevange R26 evulwa,